Imidlalo Yemoto Engcono Kakhulu Ye-PC | Izindaba zamagajethi
Imidlalo engcono kakhulu yokugijima yemoto ye-PC
UPaco L Gutierrez | | General, Imidlalo yevidiyo
Uhlobo lokushayela belulokhu luthandwa kakhulu phakathi kwabadlali bamageyimu, kepha kule minyaka eyishumi edlule lidlule ekuthandweni ngemidlalo yesenzo efana neBattleroyale efana neFortnite noma i-MOBA efana ne-lol. Kepha kukhona abaningi bethu abakujabulelayo imidlalo yokushayela, noma ngabe i-arcade noma ukumbumbuluzwa, njengoba isivumela ukuba sijahe futhi sincintisane nezimoto ebesingakwazi empilweni yangempela. Ubumnandi kubo bonke abathandi bezimoto.
Izinhlobonhlobo zamanje zezihloko kanye nobuningi bokushicilelwa kuncane, kepha sisenayo ikhathalogi ebanzi yemidlalo yalolu hlobo olucebile. Abadlali abayitoho bavame ukubheka imidlalo lapho ukuzwa kwejubane, ukuphathwa kalula, ukuxhumana nemvelo kanye nethuba lokubhubhisa imbangi kunqoba ngokushaqeka okuqondile. Ngakolunye uhlangothi, ama-purists amaningi abheka ukulingisa lapho umdlali avuzwa khona ngokwenza ibhuleki ephelele ukwenza ngcono izikhathi. Kule ndatshana sizophakamisa ukuthi yimiphi imidlalo engcono kakhulu yohlobo lomjaho ku-PC.
1 Imidlalo yokulingisa yomjaho
1.1 I-Project Cars 3
1.2 I-Assetto Corsa Competizione
1.3 IForza MotorSport 7
1.5 I-RFactor 2
2 Imidlalo yokushayela ye-Arcade
2.2 UKUNGCOLA 4
2.3 Udinga Ukushesha: Ukuphishekela Okushisayo Kubuyiselwe
2.4 IPharadesi elishisayo lihlehlisiwe
Imidlalo yokulingisa yomjaho
I-Project Cars 3
Kuphathelene ne isitolimende sesithathu komunye wemikhakha yemidlalo yamahhashi egijima kakhulu embonini. Iyakwazi ukudlulisa imizwa ejulile, imizwa nobumnandi obuningi emhlabeni onamandla wokuhamba ngezimoto ngoshintsho olubalulekile ngokubhekisele ekudlulisweni kwayo kwangaphambilini.
Isilawuli sakhiwe kabusha ngokuphelele, okuholela kusistimu yokushayela esheshayo, emnandi futhi enembile kakhulu. Sithola amasethingi ekhono azo zonke izinhlobo zabashayeli bezindiza, kusuka kumakadebona omkhulu kakhulu nochwepheshe kuya kwabanamakhono amancane nabangajwayelekile. Isimo sezulu siyashintsha ngesikhathi sangempela lokho kuzonikeza ukunotha okuningi ekusebenzisaneni nemvelo futhi kuzongeza ukubaluleka ekukhetheni amasethingi namathayi esiwenzela imoto yethu yokujaha. Kulolu shicilelo sizoba nezindlela ezahlukahlukene zemidlalo ezinjengemodi ye-trajectory ehluke ngokuphelele futhi ejulile ezothokozisa ababambe iqhaza kakhulu.
Chofoza lesi sixhumanisi uma ufuna ukuthenga i-Project Cars 3
I-Assetto Corsa Competizione
Akungabazeki ukuthi elinye lamagama amakhulu kuhlobo lomjaho nokulingiswa kwezimoto, elihlukile nge- Ilayisense yochungechunge lweBlackpain GT. Kusivumela ukuthi sizwe lo mncintiswano othokozisayo ngeqiniso nokujula okungakaze kubonwe ngaphambili. Singancintisana kusuka kuwe kuya kuwe nge abashayeli abasemthethweni bempilo yangempela, wonke amaqembu asemthethweni nazo zonke izimoto ezigijimayo kugridi.
Sithola izinhlobonhlobo eziningi zamasekethe wangempela ezenziwe kabusha ngamamilimitha ngonjiniyela abahamba phambili ngenxa yenjini yokuqhafaza Injini Engokoqobo 4. Akungabazeki ukuthi enye yezimpawu zokushayela ezihamba phambili emakethe, enqoba ngokuphelele uma sikujabulela nayo isondo lokushayela elihle, esingabona ngalo ukungapheleli kwe-asphalt, okuzokwenza isipiliyoni sethu sokushayela sibe ngokoqobo ngokwengeziwe.
IForza MotorSport 7
I-Microsoft simulator, eyenziwe ngu-Turn 10, ikwazile ukugcina leyo mfuneko edlalayo nokuthi ubuqiniso obuyibonakalisile kusukela ekufakweni kwayo kokuqala. Okusha okuyinhloko kwalesi sitolimende kuyimodi yomkhankaso ejulile ngemincintiswano yokuncintisana nobuhlakani bokuzenzela kubaphikisi bethu okufanele kushiwo, ukulawula okuthuthuke kakhulu ekuphatheni kwayo ngomyalo.
Elinye iphuzu lokudumisa isici sobuchwepheshe, okuthile okumangazayo uma singakudlala ku-4K naku-60FPS. Ezingeni lokuqukethwe akusemuva kakhulu, kunokungaphezulu kwe- Ama-700 alimele namasekethe angama-32 iyatholakala, abadlali abaningi ngokuphelele abagcwele imicimbi yesikhashana. Akungabazeki ukuthi esinye sezethenjwa zohlobo, yize ukudlala nesilawuli kuyisibonga esihle ku ukulawula okuthuthukisiweSihlala sincoma ukudlala nge-shuttlecock enhle.
Chofoza kulesi sixhumanisi ukuze uthenge iForza MotorSport 7
Esinye sezifanisi ezifuna kakhulu kunhlobo yokushayela, enengqondo futhi eqonde kumincintiswano eku-inthanethi. Inokulawula okumnandi okunezinga eliqand 'ikhanda leqiniso elivumela abathanda ukushayela okukhulu kakhulu ukujabulela ukushayela okunzima. Njengoba sike saphawula phambilini, ngalokhu kuzobaluleka ukuba nesiteringi esihleNjengasemidlalweni eyedlule, iRacing iyakwazi ukudlulisa konke okwenzeka ku-asphalt ngesiteringi.
Akungabazeki ukuthi into egqame kakhulu yale simulator yindlela yayo yokuncintisana eku-inthanethi, ngoba ifaka ilayisense lokuncintisana elihlaziya izinga lethu lokushayela nokuziphatha kwethu emzileni, ukusitholela izimbangi ezifanele zokubhekana nathi. Isihloko sinerekhodi elibanzi lezimoto nobuningi bamathrekhi atholakalayo ukujaha. Amalayisense asemthethweni afana namahora angama-24 amaLeMans, Khombisa noma iNascar. Akungabazeki ukuthi enye yama-PC simulators aphelele futhi afunwa kakhulu.
Ukuqedela ngalolu hlu lwezifanisi ezingokoqobo, ake sihambe into esondelene kakhulu ne-simulator yobungcweti, isiphakamiso esizoheha labo abafuna ukuhlala isipiliyoni esifana kakhulu nokusebenza kwisekethe yangempela. Ingxenye embi yakho konke lokhu yilokho abadlali abanamakhono amancane bangakhungatheka uma kuziwa ekutholeni ngemuva kwesondo nalesi simulator, ngaphezu kwesixhumi esibonakalayo esifushane kanye nenjini yehluzo engabukeki imbi kepha engacwebezeli kakhulu kunomncintiswano wayo. Abathuthukisi ngokungangabazeki banake kakhulu i-physics kanye namaqiniso adluliswa yisondo lokuqondisa nezakhiwo zalo.
Amaphuzu aqine kakhulu ale simulator ngokungangabazeki yiqiniso lawo njengoba siphawule nenani lamapharamitha wokumisa kuzilungiselelo zezimoto zethu. Izinguquko zesimo sezulu ezizoshintsha ngokuphelele ukuphathwa kwezimoto zethu, kusiphoqa ukuthi siphinde silungiselele yonke into futhi sifune okuningi kusuka esondweni. Ngaphandle kokungabaza, imodi yayo eku-inthanethi ayikude kakhulu ngoba umphakathi wayo mkhulu futhi kumnandi kakhulu ukuqhudelana ukwenza ngcono nsuku zonke.
Imidlalo yokushayela ye-Arcade
Ehloselwe izethameli ezikhululekile, iMicrosoft yakhipha emkhonweni wayo okuyiwona mdlalo wayo wokushayela ithandwa kakhulu njengamanje. Umdlalo osibeka ezweni elivulekile lapho singazungeza ngokukhululekile ukushayela izimoto zethu senza zonke izinhlobo zezinselelo noma izinhloso, kanye nezinhlanga ezinabaphikisi online. Amaphuzu ayo aqine ngokungangabazeki angumhlaba ovulekile oshiwo ngenhla, imidwebo yayo ebabazekayo nezinga elenziwe ngokwezifiso lezimoto elinalo. Ukulawula kuyinto esingeke sikwazi ukuyikhohlwa kusukela lapho Kuphakathi nendawo kwe-arcade emsulwa kanye nokulingisa okungafuneki kakhulu.
Ngaphandle kokungabaza, lo mdlalo umake owangaphambi nangemuva, uthatha izinkomba ezivela ku-Need for Speed ​​noma Midnight Club, lapho futhi sijabulele ibalazwe elihle lapho besigijima ngokukhululeka ukwenza imisebenzi, ukuhambela noma imijaho. Umdlalo omnandi lapho ngaphezu kokuncintisana, singakhululeka futhi ngokumane sigibele, sifeze izinselelo zejubane ngokuqhumisa wonke ama-radar asemgwaqweni omkhulu. Izinhlobonhlobo zezimoto zinkulu kakhulu, kusukela ekusetshenzisweni, ezimotweni ezingekho emthethweni noma ezimotweni ezinkulu zemidlalo.
Chofoza lesi sixhumanisi uma ufuna ukuthenga iForza Horizon 4
Ohlwini lwemidlalo yokushayela ehamba phambili asikwazi ukukhohlwa umhlaba omnandi we-rally futhi ngokungangabazeki ingenye yezindlela zokushayela ezihehayo futhi ezijabulisayo. Lolu hlobo ligcina ibhalansi enkulu phakathi kokufuna nokujabulisa, ukuvumela noma yimuphi umdlali onomkhuba othile ukuba azijabulise ngaphandle kokukhungatheka ngokweqile.
Izindlela eziku-inthanethi zikhule kakhulu ngohlelo olunamandla lwamaligi nezinselelo, yize imodi yomkhankaso ibilokhu ingemuva ngenxa yokuntula kwayo. Okuhlangenwe nakho kwe-DIRT 4 kufingqiwe ngezingxenye ezilinganayo kumnandi nokufuna ngenkani, okwenza kube ngumdlalo obalulekile kulabo abafuna umdlalo wemoto abangazijabulisa ngawo bobabili bodwa naku-inthanethi.
Chofoza kulesi sixhumanisi ukuze uthenge iDIRT 4
Udinga Ukushesha: Ukuphishekela Okushisayo Kubuyiselwe
Inkosi yokushayela i-arcade ibingabibikho kulolu hlu futhi ngokungangabazeki ukuthi i-Need for Speed ​​isezandleni zayo njengenye ye-sagas ebaluleke kakhulu yalolo hlobo. Lo mdlalo wevidiyo udlulisa konke okushiwo yi-saga kusukela isungulwa eminyakeni engu-20 eyedlule. Ihluzo ezimangazayo ezihambisana negeyimu emnandi yanoma iluphi uhlobo lomdlalo zenza kube mnandi ukuthola isondo lezimoto zalo ezahlukahlukene.
Umdlalo uyaziqhenya ngokumangalisayo Amaphoyisa axosha imigwaqo emide emide enqamula ibalazwe elikhulu. Kusemnandi njengosuku lokuqala ukufika esondweni bese wenza ohambweni lwakho olubanzi oluhambisana nomculo okhululekile futhi ojabulisayo. Umdlalo okufanele uzame nakanjani uma ungakenzi okwamanje, usebenzisa kabusha ukuqaliswa kwawo.
Chofoza kulesi sixhumanisi uma ufuna ukuthenga Isidingo Sokushesha: Ukuphishekela Okushisayo
IPharadesi elishisayo lihlehlisiwe
Enye i-saga yokushayela i-arcade eyinganekwane ebingalahlekile kulolu hlu. Ukukhishwa kwakamuva kwaleli saga nge-facelift elenza likhange ngokwengeziwe uma kungenzeka, yize kukude nezinga lokuqhafaza lamanje, inengxenye ebukekayo ekhangayo futhi igcina ukudlala kwayo okuhle kuphelele. Ukuphahlazeka kwe-supercar yethu nokuyishiya iyingozi akukaze kube mnandi kakhulu.
Umdlalo ojabulisayo nge ukuphatha okulula kakhulu lapho kufanele sikhathazeke nje ngokuqeda endaweni yokuqala, ukuzama ukwenza izimbangi zethu zilume uthuli ngokususelwa ekushayisaneni. I-soundtrack ihambisana nesivinini sokukhululeka segeyimu yayo enezindikimba ezingenakulibaleka neziphambene ezisicela ngejubane elingaphezulu. Umhlaba wayo ovulekile ugcwele ukuthunywa nezinhloso okufanele uzifeze, kanye nezimfihlo ozoziveza, ngaphandle kokungabaza isihloko esihle kunazo zonke kule saga esifanele ukudlala futhi.
Chofoza kulesi sixhumanisi ukuthenga iBurnout Paradise
Asikho isilinganiso okwamanje!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Imidlalo engcono kakhulu yokugijima yemoto ye-PC
Inothi elimangazayo, uma ungafaka i-vracing.com.ar the simulators best!
UPaco L Gutierrez kusho
Phendula uPaco L Gutiérrez
I-iPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro, iyiphi enekhamera ehamba phambili?
IHuawei FreeBuds Pro, enye indlela eya kwi-AirPods Pro ebesiyilindile